Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dagaalamaya tuulooyin ka tirsan gobolka Sh/Dhexe – Balcad.com Teyteyleey
Xaaladda degaano ka tirsan gobolka Sh/dhexe ayaa saakay laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogan, kaddib markii ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM ay gaareen tuulooyin ka tirsan degmooyin hoos yimaada gobolkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in weerarka ciidamada huwanta ah uu ku wajahan yahay tuulooyin ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaasi oo u dhaxeeya degaanka Biya Cadde iyo degmada Mahadaay.
Abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Jen. Caanood oo hoggaaminaya ciidamada Dowladda ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inay weerar ku qaadeen tuulooyin ay ku sugan dagaalyahanada Al-Shabaab, isagoona tilmaamay inay la wareegeen saldhigyo ay halkaasi ku lahaayeen.
“Waxaan ka qabsanay gaadiid, hub iyo agab ciidan, waana kala wareegnay goobihii ay weerarka ka soo qaadi jireen” ayuu yiri Abaan duuliyaha ciidamada Dowladda oo sheegay inuu socdo dagaalka isla markaana ay ku wajahan yihiin dhammaanba tuulooyinka ay Al-Shabaab ka joogaan gobolka Sh/dhexe.
Dhinaca kale ururka Al-Shabaab weli wax hadal ah kama soo saarin weerarka lagu qaaday dagaalyahanadooda ku sugan gobolka Sh/dhexe, iyadoo ilo wareedyo laga soo xigtay dadka degaanka ay sheegayaan inuu jiro qasaare baaxad leh oo soo gaaray.
The post Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dagaalamaya tuulooyin ka tirsan gobolka Sh/Dhexe appeared first on Ilwareed Online.